2019 ခုနှစ်, Aquark များအတွက်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှု၏တစ်နှစ်တာ
စမတ်ထိန်းချုပ်ရေးမှ Aquark InverGo App ကိုသင့်ရဲ့အင်ဗာရေကူးကန်အပူ Pump
သနားခြင်းကရုဏာက de nous avoir ဂုဏ်အသရေက de votre ရှိနေခြင်း။ ကျနော်တို့ Piscine ကို Global ဥရောပ 2018, ထိုရေကူးကန်များနှင့်ကျန်းမာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကြီးမားဆုံးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပြပွဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရပ်တည်ချက်သွားရောက်လည်ပတ်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များနှင့်စီးပွားရေးမိတ်ဖက်ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ အဆိုပါပြပွဲကိုကြီးစွာသောအောင်မြင်မှုတစ်ခုကို ga ခဲ့ ...
မစ္စတာတိတ်ဆိတ်, Interbad 2018 မှာအများစုကဆန်းသစ်သောရေကူးကန်အပူ Pump
ဒါဟာစတုဂတ်, ဂျာမနီအတွက် Interbad တက်ရောက်ရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တဲသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်သင့်အချိန်ကိုယူပြီးအဘို့သင်တို့ရှိသမျှကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဒါဟာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဖောက်သည်များနှင့်အတူအင်ဗာတာရေကူးကန်အပူစုပ်စက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအကြံအစည်နှင့်အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေဖလှယ်ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားများအတွက်အများဆုံးကျေးဇူးတင်ကြသည် ...
မစ္စတာတိတ်ဆိတ်, splash မှာ Fantastic ပွဲဦးထွက်! 2018
18-08-21 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
ဒါဟာ splash မှာမစ္စတာတိတ်ဆိတ်ရဲ့ပွဲဦးထွက်ပါ! ကို့အတွက်, သငျသညျလာမယ့်အဘို့လူတိုင်းကျေးဇူးတင်! ဒါဟာထိုကဲ့သို့သောဆန်းသစ်အင်ဗာတာအပူစုပ်စက်မိတ်ဆက်ပေးရနျကြှနျုပျတို့၏အပျြောအပါးပါပဲ။ ယနေ့ခေတ်သည်အင်ဗာတာနည်းပညာရေကူးကန်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အဓိကလမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ဓာတ်ငွေ့မြင့်တက်၏စျေးနှုန်းနှင့်အမျှ ပို. ပို. ရေကူးကန်ပိုင်ရှင်များကိုကြိုတင် ...
2018 ရေကူးကန် & Spa သတင်းထိပ်တန်း 50 ထည်ဆောက်စာရင်း
18-06-11 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
ဤတွင်ကျနော်တို့ဝင်ငွေအများဆုံးထွန်းလင်းသူလက်သမားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားဖြစ်တရားပုံသေနည်းဖွဲ့စည်းသောအခြားအလေးစံအသိအမှတ်ပြုရန်။ ယူအက်စ်အေဝှမ်းမှတည်ဆောက်သွက်လှုပ်ရှားမှုသတင်းပေးပို့ခဲ့ကြ, ထိုသို့ဤအုပ်စုနှင့်အတူပြသထားတယ်။ စုပေါင်းဤကုမ္ပဏီများသည် $ 746 ဝင်ငွေ, 2017 ခုနှစ် 12.164 ရေကန်တည်ဆောက်ထား ...
18-04-25 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
18-03-20 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
18-03-15 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
Aquark Eurexpo, လိုင်ယွန် (ပြင်သစ်) မှာ 2018 16 မှနိုဝင်ဘာလ 13 ကနေ Piscine တက်ရောက်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ Piscone တကမ္ဘာလုံးရေကူးကန်နှင့် Spa စက်မှုလုပ်ငန်း၏သြဇာအရှိဆုံး Expo တစ်ခုဖြစ်သည်။ Aquark ထုတ်ကုန်ဒီတရားမျှတသောမှာစတင်ပါလိမ့်မည်ဖန်တီး။ ဒါဟာအမှတ်တံဆိပ်-နည်းပညာအသစ်မတိုင်မီအပူ Pump အတွက်လျှောက်ထားဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်ပါပဲ။ သင်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည် ...
17-12-20 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
ချစ်ခင်ရပါသောဂုဏျ Customer နှင့်မိတ်ဆွေများ, ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာခရစ္စမတ်နှင့်မင်္ဂလာနှစ်သစ်, ခရစ္စမတ်ကဧဝနှင့် 2018 နှစ်သစ်ကူးမကြာမီလာမယ့်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ဒါ ~ ~ ကျွန်တော်တို့ဟာသင်တစ်ဦးသည်မင်္ဂလာအားလပ်ရက်ရာသီဆန္ဒရှိနှင့်ကျန်းမာရေး, ပျော်ရွှင်မှုနဲ့သာယာဝပြောတဲ့နှစ်သစ်ကျေးဇူးတင်ပါသည်ပြောတန်ဖိုးထားပါတယ်။ ဤတွင်ကြိမ်မြောက်, Aquark ကနေအကောင်းဆုံးဆန္ဒကိုလွှဲပြောင်း ...